Madaxweyne dhowaan xilka lagu xayuubiyey oo la qorsheynayo in xabsiga la dhigo (Daawo Sawirro) | Booqasho.org News Online - Tabiyaha Wararka Xaqiiqda Ah
Home English News Madaxweyne dhowaan xilka lagu xayuubiyey oo la qorsheynayo in xabsiga la dhigo...
Madaxweyne dhowaan xilka lagu xayuubiyey oo la qorsheynayo in xabsiga la dhigo (Daawo Sawirro)
Xeer Ilaalinta dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay doonayaan in la jaro warqad lagu soo xiro Madaxweynihii hore ee dalkaas haweeneyda la yiraahdo Park Geun-hye.
Waxay ku eedeynayaan inay door ku lahayd fadeexad musuqmaasuq oo sababtay in xilka laga qaado horaantii bishan ka dib markii Maxkamad dastuuri ah ay taageertay go’aankii baarlamanka uu shaqada uga ceyriyay Madaxweynaha.
Park waxaa lagu eedeynayaa in haweeney ay saaxiib yihiin oo lagu magacaabo Choi Soon-sil, u ogolaatay in ay lacag baad ah ka qaadato shirkadaha waaweyn inkastoo Ms. Park ay beenisay eedaha loo jeediyay.
Madaxweynihii hore ee Koonfurta Kuuriya ayaa isbuucii tagay shacabka ka raaligelisay wixii dhacay.
Maamulka dalkaasi ayaa su’aalo weydiinayay Ms Park, 14 saacadood oo xiriir ah.
“Dacwadda aad ayey u culustahay maadaama qofka laga shakisan yahay ay ku xadgudubtay awoodda, ayadoo adeegsaneysa awoodda shaqada ay haysay ee maamulka iyo madaxweynenimada,” ayay ku sheegeen dacwad oogayaasha qoraal ay soo saareen.
Dacwad oogayaasha waxay ku doodayaan in cadeymaha la baabi’in karo, haddii aanan la xirin Ms Park.
Saaxiibteed, Ms Choi, waxaa lagu oogay dacwad ah laaluush iyo musuqmaasuq, welina waxay saarantahay maxkamad.
Choi waxaa loo haystaa in ayadoo adeegsaneysa xiriirka saaxiibtinimo ee ay madaxweynaha la laheyd ay shirkadaha ku cadaadisay in ay siiyaan malaayiin dollar oo loo adeegsaday hay’ado ay iyadu maamusho.
Previous articleTheresa May oo si Rasmi ah u saxiixday Warqadii UK uga baxday Midowga Yurub (Daawo Sawirada)
Next articleDAAWO VIDEO: Qudbadii Ra’isilwasaare Kheyre uu ka Horjeediyay Baarlamaanka+Isla Xisaabtanka Xukuumada